C/raxmaan Faroole oo ku guuleystay kursiga labaad ee Puntland ku leedahay Aqalka Sare – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
C/raxmaan Faroole oo ku guuleystay kursiga labaad ee Puntland ku leedahay Aqalka Sare
Madaxweynihii hore ee maamulka Puntland C/raxmaan Maxamed Maxamuud (C/raxmaan Faroole) ayaa noqday shaqsigii labaad ee ku guuleysta kursiga Aqalka Sare ay Puntland ku leedahay baarlamaanka cusub ee Soomaaliya.
C/raxmaan Faroole ayaa tartanka doorashada kaga guuleystay musharax kale oo lagu magacaabo Cabdi Madi Abshir Cismaan.
Xildhibaanada Puntland ayaa u codeeyay labadaasi musharax, wuxuuna C/raxmaan Faroole helay 59 cod, halka Cabdi Madi Abshir Cismaan uu isna helay 5 cod, iyadoona 1 cod kaliya uu xumaaday.
Siciid Jaamac Qorsheel oo ka mid ah guddiga doorashooyinka ee heer federaal ayaa ku dhawaaqay natiijadda cod bixinta ee labadaasi musharax, wuxuuna sheegay in C/raxmaan Faroole uu ku guulaystay kursiga Aqalka Sare.
Dhinaca kale, waxaa weli magaalada Garoowe ka socda codeynta musharixiinta u tartameeysa xubnaha Puntland u matalaya Aqalka Sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Si kastaba ha ahaatee, C/raxmaan Faroole oo haatan ka mid noqday Aqalka Sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa hore u ahaa madaxweynaha maamulka Puntland, wuxuuna sidoo kale haatan yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ee doorashadda 2016-ka.